Warar - R & D alaab cusub
Saddex faa iidadood oo usheeda dhexe ay ku jirto:
Ugu horreyntii, marka laga eego aragtida xoogga, in kasta oo fiber-ka loo yaqaan 'fiber fiber' uu yahay maaddada fiber-ka, xoogga waxsoosaarka ka dib marka la sameeyo ayaa ka wanaagsan kan inta badan qalabka dhismaha, gaar ahaan wuxuu leeyahay xoog foorarsi wanaagsan oo wuxuu u adkeysan karaa wax ka badan fallaadhihii wadista birta .
Isla mar ahaantaana, xoog-u-rogidda culeyska maadada kaarboonka ayaa dhowr jeer ka sameysan birta, xooggana xiiriddu sidoo kale way ka fiican tahay tan qalabka dhismaha badankood, oo buuxiya baahiyaha xoogga isticmaalka.
Kaarboon kaarboonku waa shey wanaagsan oo miisaanka yareeya. Cufnaanteedu waa keliya 1.7g / cm3. Cufnaanta qalabka dhismaha ee sida caadiga ah loo isticmaalo aluminium iyo bir waa 2.7g / cm3 iyo 7.85g / cm3 siday u kala horreeyaan. Marka la barbardhigo, mashiinka wadista ee ka samaysan kaarboonka kaarboonku wuxuu ku habboon yahay xaqiijinta qaabdhismeedka
Miisaan fudud, marka qaabdhismeedka jirka la khafiifiyo, waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato tamarta keydinta iyo yareynta qiiqa gaariga.
Ugu dambeyntiina, xawaaraha muhiimka ah waxaa loola jeedaa xawaaraha uu rotorku si xoog leh u gariirayo. Guud ahaan, marka rotor-ku uu ku socdo xawaaraha halista ah, gariir daran ayaa dhaca, iyo qallooca usheeda dhexe aad buu u kordhaa. Qalliinka muddada-dheer wuxuu sababi doonaa isbeddel daran ama xitaa jabitaanka usheeda dhexe.
Mashiinka la wado wuxuu leeyahay xawaare aad u sarreeya, oo si wax ku ool ah uga fogaan kara dhibaatooyinka noocaas ah.
Marka cusbada, wakiilka daweynta iyo walxaha kale lagu qaso saami cayiman, ka dibna dharka fiber kaarboonka ah la dhexgalo, kadib daaweyn isdaba-joog ah oo daaweyn ah kadib, waxaa la sameeyaa waxyaabo isku dhafan oo kaarboon kaarboor ah, oo ah walxaha shaashadda madow ee inta badan aan awoodno gaadhiga ku eeg.Madhadani waxay leedahay faa iidooyin aan qalabka biraha dhaqameed u dhigmi karin.
Si kastaba ha noqotee, mashiinka gudbinta kaarboonka kaarboonku kama wada koobna fiber kaarboon. Taabadalkeed, qalfoofka marinka gudbinta waxaa marka hore laga sameeyaa maaddada mesh birta ah, iyo xirmo dhan oo ka mid ah fiilooyinka kaarboon kaarboon ah oo wadar ahaan dhererkoodu ka badan yahay 100 mitir ayaa si tartiib tartiib ah ugu dhagan qalfoofka birta.